Ubuntu 20.04.3 LTS na -abịa na Linux 5.11, Mesa 21.0, mmelite na ndị ọzọ | Site na Linux
Ọchịchịrị | 07/09/2021 00:39 | Nkesa
Mmelite ohuru nke Ubuntu 20.04.3 LTS ewepụtalarị mee ọtụtụ ụbọchị na n'ime ya mgbanwe ndị metụtara nkwado ngwaike dị mma gụnyere, Linux kernel na ndịna-emezi tojupụtara mmelite, installer na bootloader bug fixes.
Ọzọkwa gụnyere mmelite kachasị ọhụrụ maka ọtụtụ narị nchịkọta iji lebara okwu adịghị ike na nkwụsi ike anya, gbakwunyere mmelite yiri ya maka Ubuntu Budgie 20.04.3 LTS, Kubuntu 20.04.3 LTS, Ubuntu MATE 20.04.3 LTS, Ubuntu Studio 20.04.3 LTS, Lubuntu 20.04.3 LTS, Ubuntu Kylin 20.04.3. 20.04.3 LTS na Xubuntu XNUMX LTS.
Ụdị nke atọ a na -achịkọta mmelite ngwanrọ niile ewepụtara ruo taa, yana patch nche dị iche iche yana nnukwu mmezi ahụhụ.
1 Isi ihe ọhụrụ nke Ubuntu 20.04.3 LTS
1.1 Etu esi melite mmelite Ubuntu 20.04.3 LTS ọhụrụ?
Isi ihe ọhụrụ nke Ubuntu 20.04.3 LTS
Ubuntu 20.04.3 LTS gụnyere ụfọdụ nkwalite nke ụdị Ubuntu 21.04 nke anyị nwere ike chọpụta na emeela nwelite maka ngwugwu yana ụdị kernel 5.11, ebe Ubuntu 20.04 na 20.04.1 jiri kernel 5.4 na 20.04.2 jiri kernel 5.8.
Ka ọ dị na mbụ, Ewelitela HWE (Stack Enablement Stack) na mbata nke Linux kernel 5.11 Ụdị nke a gụnyere nkwalite dị iche iche na Btrfs, na -egosipụta nhọrọ ugwu iji mee ihe mgbe ị na -eweghachite data sitere na sistemụ faịlụ mebiri emebi, yana iwepu nkwado maka nhọrọ ugwu a na -emebighị emebi na mbụ "inode_cache". ibe (PAGE_SIZE), yana nkwado maka oghere zoning.
E wezụga nke ahụ Agbakwunyela usoro ọhụrụ na oku oku sistemụ, dabere na prctl () na nke ahụ na -enye ohere ịtụfu ihe dịpụrụ adịpụ na oghere onye ọrụ mgbe ị na -enweta oku sistemụ ma na -e emomi mmezu ya. Ọrụ a bụ rịọrọ na Wine na Proton ka ha ulateomie oku sistemụ Windows, nke dị mkpa iji hụ na ndakọrịta na egwuregwu na mmemme na -eme oku ozugbo na sistemụ na -agaghị na Windows API.
Maka ije RISC-V, agbakwunyere usoro maka icheta ebe nchekwa Allocator ebe nchekwa (CMA), nke a na -eme nke ọma ikenye mpaghara ebe nchekwa buru ibu site na iji usoro mmegharị ibe. Maka RISC-V, enwekwara ngwaọrụ etinyere iji belata ohere ịbanye / dev / mem na akaụntụ maka ịkwụsịtụ oge nhazi.
N'akụkụ ndị na -achịkwa ya anyị nwere ike ịhụ Isiokwu 21.0, ma e wezụga na emelitere gburugburu desktọpụ na GNOME Shell 3.36.9, LibreOffice 6.4.7, Mozilla Firefox 91, GCC 10.3.0, Python 3.8.10, akpa 1.5.2, ceph 15.2.13, snapd 2.49, igwe ojii init 20.4 na ngwa sistemụ ndị ọzọ.
N'akụkụ akụkụ nke nchịkọta eserese nke emelitere, ha gụnyere X.Org Server 1.20.11 na Mesa 21.0, nke a nwalere na ụdị Ubuntu 21.04. Agbakwunyere ụdị ọkwọ ụgbọ ala vidiyo ọhụrụ maka ibe Intel, AMD na NVIDIA.
Maka sistemụ sava, agbakwunyere kernel ọhụrụ dị ka nhọrọ n'ime onye nrụnye, yana mgbakọ ọhụrụ ka a ga -eji maka nrụnye ọhụrụ naanị: sistemụ arụnyere na mbụ nwere ike ịnweta mgbanwe niile dị na Ubuntu 20.04.3 site na sistemụ nrụnye ọkọlọtọ.
Anyị ga -echeta nke ahụ a na -eji usoro nkwado mmelite na -aga n'ihu iji nyefee ụdị kernel ọhụrụ na nchịkọta eserese, nke a ga -akwado kernels na ndị ọkwọ ụgbọ ala ga -akwado naanị ruo mgbe ewepụtara mmelite patch alaka Ubuntu ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, a ga -akwado kernel Linux 5.11 nke ewepụtara na mwepụta ugbu a ruo Ubuntu 20.04.4, nke ga -enye Ubuntu 21.10 kernel. Na mbu ebupu, a ga-akwado kernel 5.4 maka usoro mmezi afọ ise zuru ezu.
N'adịghị ka nsụgharị nke LTS gara aga, ụdị ọhụrụ nke kernel na nchịkọta eserese ga -etinye na nrụnye dị na Ubuntu Desktop 20.04 na ndabara, a naghị enyekwa ya n'ụdị nhọrọ. Iji tụgharịa laghachi na kernel 5.4, mee iwu a:
Etu esi melite mmelite Ubuntu 20.04.3 LTS ọhụrụ?
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịkpọtụrụ nkọwa ya Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ubuntu 20.04.3 LTS na -abịa na Linux 5.11, Mesa 21.0, mmelite na ndị ọzọ
MATE 1.26 na -eji nkwalite ngwa, nkwado Wayland na ndị ọzọ abịa